Edgar Allan Poe. Yegumi nemakumi matatu yekufa kwake. Nhetembo dzangu nhatu dzakasarudzwa | Zvazvino Zvinyorwa
Edgar Allan Poe. Yegumi nemakumi matatu yekufa kwake. Nhetembo dzangu nhatu dzakasarudzwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Nhetembo
Gumiguru 7, 1849. Baltimore. Hupenyu hwakasiiwa imomo makore 170 apfuura mumwe wevanyori vakakurumbira vezvinyorwa zvepasirese. Izvo hazvina basa kuti kangani kaunogona kutaura nezvako Edgar Allan Poe, zviuru zvezvinyorwa, mabhuku uye zvidzidzo pamufananidzo wake izvo zvinoburitswa. Izvo hazvina basa kuti kangani yavo, yavo nyaya, nyaya, nyaya uye nhetembo zvinoverengwa. Izvo hazvina basa kana iwe uchiramba uchifungidzira nezve rake ramangwana, kufemerwa kana hupenyu hwake, hwakatoudzwa kune husingaperi
Edgar Allan Poe tevera uye ucharamba uchifadza chero muverengi yenyika iyo yatora kana kamwechete pekutarisa pabasa rake. Uye zvimwe kana iri shungu pamusoro chakavanzika, kutya kana rima Mhedziso. Zvakare zve rudo kupfuura kufa kana kusafa. Nhaka yezita rake ichavewo yekusingaperi. Izvi ndizvo nhetembo dzangu nhatu dzandaifarira izvo zvandinogovana nhasi mundangariro dzako: Annabel lee, Iwe unoda here kuti vakude iwe? y Kurota.
Chokwadi isu tese takaaverenga pane imwe nguva, kunyanya inonyanya kuzivikanwa: Annabel lee. Kana ndiani asina kunzwa iyo vhezheni yakagadzirwa neRadio Futura?
1 Iwe unoda here kuti vakude iwe?
2 Annabel lee
Iwe unoda here kuti vakude iwe?
Iwe unoda here kuti vakude iwe? Saka usarase
nzira yemoyo wako.
Chete izvo zvauri iwe unofanirwa kuve
uye zvausiri, kwete.
Saka munyika, nzira yako isinganzwisisike,
nyasha dzako, hunhu hwako hwakanaka,
uye rudo ... basa rakareruka.
Yakanga yakawanda, makore mazhinji apfuura
paigara musikana waungazive
anonzi Annabel Lee;
uye mukadzi uyu akararama asina chimwe chishuwo
pane kundida, uye kudiwa neni.
Ini ndaive mukomana, uye iye musikana
muhumambo ihwohwo negungwa;
Tinodanana nechishuwo chikuru kupfuura rudo,
Ini naAnnabel Lee wangu;
nehunyoro hwakadaro zvekuti maserafi ane mapapiro
vakachema misodzi kubva kumusoro.
Uye nekuda kweichi chikonzero, nguva refu, refu yapfuura,
muumambo ihwohwo negungwa,
mhepo yakavhuvhuta ichibva mugore,
kutonhora wangu akanaka Annabel Lee;
madzitateguru akashata akauya kamwe kamwe,
uye vakamukwevera kure kure neni,
kusvikira avharirwa muguva rine rima,
muhumambo ihwohwo negungwa.
Ngirozi, hafu vanofara Kudenga,
Ivo vaitichiva, Her, ini.
Hongu, ndicho chikonzero (sekuziva kwevanhu,
muumambo ihwohwo negungwa),
kuti mhepo yakavhuvhuta ichibva kumakore ehusiku,
chando uye kuuraya wangu Annabel Lee.
Asi rudo rwedu rwaive rwakasimba, zvakanyanya
kupfuura izvo zvemadzitateguru edu,
mukuru kudarika wevachenjeri vese.
Uye hapana mutumwa mudenga rake rekudenga,
hapana dhiyabhorosi pasi pegungwa,
haigoni kuparadzanisa mweya wangu
yaAnnabel Lee akanaka.
Hameno mwedzi haupenye usina kundiunzira hope
yeshamwari yangu yakanaka.
Uye nyeredzi hadzimbomuki dzisina kubuda
maziso ake anopenya.
Kunyange nanhasi, apo mafungu anotamba usiku,
Ndinovata padivi pomudiwa wangu, mudiwa wangu;
kuhupenyu hwangu uye mudiwa wangu,
muguva rake nemafungu,
muguva rake pamhenderekedzo yegungwa.
Tora kutsvoda uku pahuma!
Uye, kubvisa huremu
ndisati ndaenda, ndinoreurura
chii chawakanyatsokwana kana uchitenda
kuti mazuva angu ave chiroto;
Asi hazvina kunyanya kukosha
usiku kana zuva rakazara,
uine kana pasina chiratidzo?
Kusvika kwedu kwekupedzisira kuedza
Ingori hope mukati mekurota
Kutarisana negungwa rinotinhira
chii chinoranga mudariki uyu
Ndine chanza chakasimba
tsanga dzejecha regoridhe.
Ivo vashoma! Uye munguva pfupi
ivo vanotsvedza kubva pandiri uye ndinonzwa
simuka mandiri kuchema uku:
Ah Mwari! Nekuti ini handigone
kuvabata muzvigunwe zvangu?
Ah Mwari! Dai ndaigona
ponesa imwe kubva kumafungu!
kunongovawo kurota mukati mehope here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Edgar Allan Poe. Yegumi nemakumi matatu yekufa kwake. Nhetembo dzangu nhatu dzakasarudzwa
Morris West. Chirangaridzo cherufu rwake. Mamwe emabasa ake
Mabhuku matatu evechidiki uye marongero avo akanaka